အစိုးရနှင့် UNFC နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးရန် အကြိုတွေ့ဆုံ | ဧရာဝတီ
သန်းထိုက်ဦး| February 20, 2013 | Hits:12,025
2 | | ယနေ့ တွေ့ဆုံပွဲသို့ တက်ရောက်လာသည့် အစိုးရနှင့် UNFC ကိုယ်စားလှယ်များ (ဓာတ်ပုံ – သန်းထိုက်ဦး / ဧရာဝတီ)
တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ ဖက်ဒရယ် ကောင်စီ (UNFC)နှင့် အစိုးရ ပြည်ထောင်စု အဆင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေးအဖွဲ့ ကိုယ် စားလှယ်များသည် နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးပွဲများအတွက် ပထမဆုံးအကြိမ် ကြိုတင် ညှိနှိုင်း ဆွေးနွေးပွဲတရပ်ကို ထိုင်းနိုင်ငံ ချင်းမိုင်မြို့တွင် ယနေ့ ပြုလုပ်သည်။
အကြိုပြင်ဆင်ရေး ကာလနှင့် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲ ဖြစ်စဉ်တလျှောက် UNFC အဖွဲ့ အစည်းများ၏ နယ်မြေများအတွင်း လူသားချင်း စာနာမှု ဆိုင်ရာ ကိစ္စများ၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး ကဏ္ဍများကို ပြည်တွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာမှ ပံ့ပိုး ကူညီမှုများကို ဆက်လက် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
နှစ်ဖက် ကိုယ်စားလှယ်များသည် နိုင်ငံရေး ဦးတည်ချက်၊ နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးပွဲ အတွက် လိုအပ်သော မူဘောင်၊ နိုင်ငံရေးဆွေးနွေး ပွဲတွင် ချမှတ်ရမည့် အစီအစဉ်များ ကြိုတင်ညှိနှိုင်း ရေးဆွဲခြင်း၊ နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးပွဲအတွက် နေရာ၊ ကြားဝင်ဆောင်ရွက်ပေးမည့် သက်သေများ ထားရှိရေး၊ တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ၏ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆိုင်ရာ နိုင်ငံရေး လုပ်ငန်းစဉ်များကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်ဟုလည်း ယနေ့ ထုတ်ပြန်သည့် ပူးတွဲကြေညာချက်တွင် ပါရှိသည်။
“အစပိုင်းမှာ သဘောထားမှန်မှန်နဲ့ ဆွေးနွေးကြတာ တော်တော်လေးကောင်းတယ်၊ ကျနော်တို့ အများကြီး အားရတယ်၊ ဒီနေ့ အမြင်တွေ ညှိနှိုင်းမှု အပေါ်မှာ အမြင်တွေ နီးစပ်တယ်၊ အဖြေကောင်းတွေ အများကြီး ရလာဖို့ရှိတယ်လို့ မြင်တယ်”ဟု UNFC အဖွဲ့မှ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ နိုင်ဟံသာက သတင်းထောက်များကို ပြောသည်။
ဆွေးနွေးပွဲကို UNFC မှ နိုင်ဟံသာနှင့် ဒေါက်တာလဂျာ၊ ဦးခွန်ဥက္ကာ၊ ဦးအောင်ဆန်းမြင့်၊ ခူးဦးရယ် အပါအ၀င် ၁၂ ဦး တက်ရောက် ပြီး အစိုးရဘက်မှ ပြည်ထောင်စု အဆင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းကော်မတီ ဒု ဥက္ကဌ ဦးအောင်မင်း ဦးဆောင်၍ ဦးခင်ရီ၊ ဦးအုန်းမြင့် အပါအ၀င် ဒုတိယ ရှေ့နေချုပ် ဦးထွန်းထွန်းဦးတို့ တက်ရောက်ကြသည်။
“နှစ်ဖက် ကိုယ်စားလှယ်တွေ အခုလို တွေ့ဆုံနိုင်တာ ကျနော်တို့ နိုင်ငံအတွက် အများကြီး အလာအလာကောင်းတယ်၊ ပြောကြ ဆိုကြတဲ့ အခါမှာလည်း အတော်ကောင်းတယ်၊ တဖက်က ကျနော်တို့နိုင်ငံမှာ ပြည်တွင်းစစ် ၆၅ နှစ် တိတိပြည့်လာပြီး ဒုက္ခတွေ ကြုံနေ ရတဲ့အပေါ်မှာ ဒီလိုနိုင်ငံရေးအရ အဖြေမရှာလို့ မရတော့ဘူး ဆိုတဲ့အပေါ်မှာလည်း လေးနက်မှုတွေ တွေ့ရတယ်”ဟု နိုင်ဟံသာ က ဆက်ပြောသည်။
ဦးအောင်မင်းကလည်း ကချင် လွတ်လပ်ရေး တပ်မတော်(KIA) အနေနှင့် တခြားသော တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်း များကဲ့သို့ နိုင်ငံရေး တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲသို့ ရောက်လာလိမ့်မည် ဖြစ်ကြောင်း သတင်းထောက်များကို ပြောကြားသည်။
“ကချင်ထဲက လောလောဆယ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၄ ရက်နေ့က ပူးတွဲ ကြေညာချက် တစောင် ထုတ်ပါတယ်၊ အဲဒီစာထုတ်ပြီးတဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ တိုက်ပွဲတွေ တော်တော် အေးချမ်း သွားပါပြီ၊ နောက်ထပ် တွေ့ဆုံဖို့လည်း ရှိပါတယ်၊ တခြား တိုင်းရင်းသားတွေကို ဆက်လက် တွေ့ဆုံသလိုပဲ ဆက်ပြီးလုပ်ပါမယ်”ဟု ဦးအောင်မင်းက ပြောသည်။
ဒုတိယအကြိမ် ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို နှစ်လအတွင်း ထပ်မံကျင်းပရန် နှစ်ဖက် သဘောတူညီခဲ့ကြကြောင်းလည်း ပူးတွဲထုတ်ပြန် သည့် ကြေညာချက်တွင် ပါရှိသည်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလက ဦးအောင်မင်းနှင့် UNFC ခေါင်းဆောင်များ နောက်ဆုံး အလွတ် သဘော တွေ့ဆုံခဲ့စဉ် နိုင်ငံရေး ပြဿနာများကို နိုင်ငံရေး အရ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး အဖြေရှာရန် စီစဉ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
UNFC အစည်းအဝေးသို့ ကချင်လွတ်လပ်ရေး အဖွဲ့ (KIO)၊ ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံး (KNU)၊ ကရင်နီ ပြည်သူ့ တိုးတက်ရေး ပါတီ (KNPP)၊ မွန်ပြည်သစ်ပါတီ (NMSP)၊ ရှမ်းပြည် တိုးတက်ရေးပါတီ (SSPP)၊ ပအို့ဝ်အမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေး အဖွဲ့ (PNLO)၊ ပလောင်ပြည် လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦး (PSLF)၊ ရခိုင် အမျိုးသားကောင်စီ (ANC) အဖွဲ့များမှ တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်များ တက်ရောက်ကြခြင်း ဖြစ်သည်။
၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် နိုဝင်ဘာလတွင် အမျိုးသား တန်းတူရေးနှင့် ကိုယ်ပိုင် ပြဌာန်းခွင့် ရရှိရေးအတွက် KNU, KIO အစရှိသည့် လက် နက်ကိုင် ၆ ဖွဲ့ဖြင့် ဖယ်ဒရယ် ပြည်ထောင်စု ပေါ်ထွန်းရေး ကော်မတီ (CEFU) ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် အဖွဲ့ဝင် ၁၁ ဖွဲ့ဖြစ် လာကာ UNFC အဖြစ် ပြောင်းလဲ ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။
Your email address will not be published. Required fields are marked *	Name * Email * Website Comment Shwe Thway February 20, 2013 - 11:13 pm	They just wasted time again. Instead they better fix time for political dialogue. I have never heard or seen this kind of blah blah talks in other parts of the world who have political issues. Livestock and fisheries are not supposed to be the agendas between government and the UNFC. Political reform will solve these kinds of small issues automatically. I see nothing other than wasting time and money here in Chiang Mai, Thailand. Photo op is always the only result of the meeting.
Reply	ကိုစိုင်း February 21, 2013 - 12:40 pm	၀န်ကြီးဦးအောင်မင်းကိုတွေ့ဆု့သည့်အဖွဲ့မှာUNFC၏အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သော လားဟူဒီမိုကရက်တစ်သမဂ္ဂလည်းပါတယ်ခင်ဗျား။